China magurovhosi Kugadzira uye Fekitori | Yiwu Shunshui
Masokisi Uye Hosiery
Hippy Masokisi-Akanaka uye Anoshamisa
Teddy Anodziya Masokisi
Kisimusi Uye Sokisi yeHalloween
Knit Hats Uye Makambani Uye Caps
Knit Gloves Uye Mittens
Hats Zhizha Uye Caps
Basa haringomiri nekuti tembiricha inodonha, asi pasina akakwana magirovhosi, zvingave zvinorwadza kupedzisa basa kuchitonhora. Kutenda kuputira, kupfeka isina mvura uye kukuru kuchinjika mune akanakisa magiravhosi ebasa, zvishandiso zvinotonhora neminwe yakaoma hazvizove dambudziko. Naizvozvo, ndapota chengeta minwe yako mbichana uye upfeke magurovhosi akanaka kubata zvinhu izvi:
Magirovhosi ebasa rechando akasiyana nemagurovhosi aunowanzoshandisa kushongedza nharaunda uye nerimwe basa rinodziya remamiriro ekunze. Ivo vanofanirwa kusangana nezvimwe zvese zvinodiwa kudzivirira kusagadzikana uye kukuvara. Kana uchitenga akanakisa magiravhosi ebasa rechando, zvinotevera zvinhu zvakakosha zvinoda kutariswa.
Basa rechando rinowanzoreva kugadzirisa kwekukurumidza kana kubviswa kwechando, asi zvinogona zvakare kusanganisira mapurojekiti akasiyana ausina nguva yawo mukati memwedzi yakaoma. Kana iwe uchida kugadzirisa zvemuchina, magirovhosi ebasa rako anofanirwa kuve anochinjika kuitira kuti zvigunwe zvako zvigone kubata diki Hardware. Vanofanirawo kuve vatete zvakakwana kuti vakwane munzvimbo dzakaomarara, senge dzinovharira injini zvikamu. Yekubvisa chando uye mamwe mabasa ane yakaderera tekinoroji zvinodiwa, magiravhosi ekushanda anofanirwa kuve akasimba uye asina mvura yekuchengetedza maoko kuoma uye kudziya. Basa rakakosha kudzivirira chando kuti chisapinda muhomwe yewrist.
Izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa mumagetsi uye echinyakare magirovhosi ebasa kazhinji akasiyana zvakanyanya. Synthetic materials (yakadai senylon, spandex, uye polyester) zvakajairika mumagetsi magurovhosi. Izvi zvinhu zvakaoma, zvisina mvura, zvisina kuremerwa uye zvakapfava zvinopa mukana wekuchinja uye zvinokodzera kuiswa munzvimbo dzakamanikana. Mune mamwe mapurojekiti, magurovhosi anorema akagadzirwa neganda rakavharidzirwa anoparadzira kupisa mukati, nepo kunze kuchichengetwa kuchitonhora uye kusina mvura. Ivo vanogona kutokomberedzwa nematehwe kuchengetedza yakanyanya kupisa. Iwo akakora kupfuura girafu yekugadzirisa uye akakodzera kumabasa ekunze asina kureruka zvishoma.
Iwe unoda kunyaradzwa kwakanyanya uye mashandiro. Kuedza kupedzisa chirongwa nemagurovhosi akakurisa zvakanyanya kazhinji hazvina maturo. Zvakare, sezvo zvinhu zvakawanda zvinopisa zvinopisa kupisa kwemuviri wemunhu kuburikidza nehomwe dzemhepo, magurovhosi madiki kwazvo anogona kusvina homwe dzemhepo, nokudaro ichideredza kudzora kupisa.
Vazhinji vagadziri vanopa saizi machati ekukubatsira iwe kusarudza akanakisa magiravhosi echando paruoko rwako. Izvi zvinobatsira nekuti saizi inogona kusiyana kubva kugadziri kuenda kugadziri. Unogona kuve nenzvimbo mune rimwe brand uye nzvimbo yepakati mune imwe brand. Iwe unogona kushandisa akasiyana saizi matafura kuyera ruoko rwako uye kusarudza kuti idiki, yepakati kana yakakura saizi yakanakira kune iyo imwe mhando.
Magurovhosi anongova chete nhete yezvinhu haakwanise kudzivirira maoko ako munzvimbo inotonhora inotonhora kana mumhepo, chando kana mvura. Iwo akanakisa magiravhosi ebasa echando anofanirwa kuve nezvikamu zvakawanda zvezvinhu, izvo zvinogona kushanda pamwe chete kuti udziirwe.
Goko rekunze rakagadzirwa nedehwe kana zvinhu zvekugadzira zvinokwanisa kudzivirira maoko kubva mukukwaya nekukuvara, uku zvichidzivirirawo mhepo nemvura kupinda. Mukati, rukoko rwewuru, mvere kana polyester kuputira kunobatsira kuchengetedza muviri kupisa uye kuuchengeta uchidziya. Parizvino, mvere ndeimwe yeakanakisa ekushisa ekuisa zvinhu. Kunyangwe mune yakanyorova mamiriro, mvere dzinogona kuchengetedza kupisa, zvinoreva kuti ziya harizokanganisa nyaradzo yako. Mvere dzemakwai dzakanyanya-kukwana, mashandiro ayo akafanana nemvere dzemakwai, asi kugona kwacho kwakaderera. Polyester ndiyo isinganetsi pane matatu sarudzo.
Kana maoko ako akanyoroveswa nedikita kubva mugurovhusi, iro giravhosi rinogona kurasikirwa nehusimbe hwaro. Gloves ine shoma yekufema inodzivirira mawoko kubva pakupisa zvakanyanya, zvichibvumira mweya unopisa kutiza uchichengetedza tembiricha yakanaka. Shinda dzepanyama senge mvere dzemakwai dzinofema kupfuura shinda dzekugadzira. Leather kana rawhide basa magurovhosi ane nylon kumusana zvinopa imwe nhanho yekufema pasina kufumura ruoko rwako rwese kuzvinhu zvakasiyana.
Magirafu ebasa rechando anofanira kunge asina mvura. Kunze kwekukwiza maoko ako mumhepo inotonhora, hapasisina imwe nzira yekukuvadza ganda rako, zvigunwe, kupera kwetsinga uye kushanduka. Magurovhosi ane Rubberized anogona kudzivirira mvura kupinda, saka kunyangwe iwo asingafeme, iwo sarudzo yakanakisa kana uchishanda mukunaya nesinou. Zvishandiso izvo zviripo zvisina-mvura (senge dehwe nematehwe) zvinogona kurapwa nesilicone mapiritsi uye zvinowedzerwa kugadzira rukoko rwemvura inoyerera, ichiita kuti isapinda.
Post nguva: Sep-08-2020
Adress:RM 1002, A # Wanda Center, Guta reYiwu Guta reZheJiang, China 322000